Maxaa loo arkaa xagjirnimo? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baraha bulshadu ku wada xidhiidho sawir: Sawirqaade: Vilhelm Stokstad/TT
Baraha bulshada oo ka hortegaya xagjirnimada
Maxaa loo arkaa xagjirnimo?
Maxaa xagjirnimo ah?
La daabacay onsdag 28 december 2016 kl 13.53
Baraha bushadu ku wada xidhiidho ayaa xidhaya akoonada ay u arkaan in ay xagjirnimo faafinayaan. Balse maxaa loo arkaa in ay yihiin xagjirnimo.
Anne Kaun oo ah profesor wax ka dhiga jaamacada södertörn högskola ee magaalada Stockholm oo ku takhalustay baraha bulshada ayaa uga warantay idaacada Radio sweden laanta afka Pershiyanka sida ay u aragto baraha bulshada ee xidhaya akoonada dadka ay aaminsan yihiin in ay faafinayaan xagjirnimo. Anne Kaun waxay sheegtey in loo bahan yahay in marka hore laga doodo waxa xagjirnimo tahay.
- Waa maxay waxa loo arko in ay yihiin xagjirnimo? Markaa kadib ayaa laga doodi karaa sidii looga hortegi lahaa dadka wada wax ay ku dhaawacayaan dimuqraadiyadda. Sidookale markaas kadib ayaa laga hadli karaa sida ururada kala duwan ee xagjiriinta ahi u adeegsadaan baraha bulshada. Laakin marka hore waa in laga bilaabo in si furan looga dooda waxa maanta loo arko xagjirnimo.
Anne Kaun oo siida wada hadlakeeda ayaa tidhi
- Dad ayaa ka shaqeeynaya in ay eegaan wixii la geliyo baraha bulshada si ay u xidhaan waxyaabaha qaarkood. Laakiin lama oga sharciyada ay raacayaan dadkani. Facebook si furan ugama hadlaan waxa ay raacayaan si ay u xidhaan akoonadan.